Mazano Ekutaurirana Akanakisa Maitiro eTekiniki Kutanga | Martech Zone
China, January 6, 2011 Chitatu, October 29, 2014 Adam Mudiki
Kubatanidza mashoma emukati nekunze kutaurirana zvakanakisa maitiro ichapa hwaro hwakasimba hwekukura mune ramangwana.
Ziva kukosha kweRuzhinji Hukama - Izwi remuromo uye tweeting zvinounza kufarira uye chikamu chakakomba chekuparidzira evatengi vehunyanzvi vanhasi. Asi yechinyakare PR chirongwa chine mukana kune vaongorori uye vapepeti vane vakagadzirira uye vakavimbika vateereri vevaverengi. Kana mupepeti ari tweets kana achinyora chinyorwa kukambani yako, panogona kunge paine zviuru kusvika makumi ezviuru vanozviona. Maindasitiri vaongorori uye vapepeti vane zvakare mbiri yekuve vane chinangwa nyanzvi. Kuve neyechitatu-bato kusimbiswa kwemhinduro yako kunotakura huremu hwakawanda pane kuzvisimbisa. Bata zano rekudhinda rine ruzivo mune yako chigadzirwa chikamu. Wedzera ruzivo rwavo uye usvitswe kune nyanzvi dzinovhara zvigadzirwa zvakafanana nezvako. Kufurira avo vanokonzeresa nekuvandudza pamusika wekutengesa, tekinoroji hunyanzvi uye mameseji ane chekuita nemaindasitiri maitiro. Shingirira kuvaka hukama hwenguva refu nevatori venhau uye uwane kunzwisisa kwezvavanoda kuti vagadzire zvirimo zvekuburitsa.
Edza meseji yako yemubatanidzwa uchipesana nemaonero ekunze nekutsvaga - Usadaro kunwa koolaid uye bvuma nemaonero ako manejimendi epasi. Kugamuchira kutaura kwemukati kunovimbisa kuti chigadzirwa chako chichava "chekutanga, chakasarudzika, chakanakisa, uye vatengi vakaita mutsetse kuti vatenge" zvingangotadza kuenderana nezvazviri uye zvinofanirwa kuyedzwa. Kunyangwe hazvo hutano hwekutarisira zviri izvo kushambadza zviri zvese, usaregeredze zvimwe zviri kuitika mumusika. Taura chokwadi. Kana usiri wekutanga uye akanakisa - usazvivake izvo mumatanda ako egoridhe. (Zvakare izwi renyevero: Chenjera kuti usashandise mazwi akawandisa uye mabuzzwords.) Ganhurira iwo akakwirira - mukati nekunze. Bulletproof yako mameseji nevanoongorora maindasitiri uye nyanzvi vanoziva nezve makwikwi ako uye musika waunotamba mairi. Chigadzirwa chimwe nechimwe kana sevhisi ine mukwikwidzi weimwe mhando- kambani haigone kuve mutungamiri muchikamu cheimwe. Dambudziko manejimendi kuburitsa chokwadi, ongororo uye fungidziro yekutsigira kugona kwechigadzirwa mugwagwa. Chinangwa chakajairika ndechekuti kambani ibudirire.
Kurudzira kutaurirana pakati peboka rehunyanzvi uye bhizinesi musangano rako - Zviwanikwa mukutanga zvinotambanudzwa asi dzivisa muyedzo wekuparadzanisa timu yako yekuvandudza chigadzirwa kubva kuvanhu (kazhinji kutengesa uye kushambadzira) vari kutaura nevatengi vako vemunguva yemberi. Vagadziri vehunyanzvi dzimwe nguva vanopinda mukukudziridza "inotonhorera" tekinoroji vasina kusimbisa kuti ichangoburwa gizmo chimwe chinhu icho munhu angangoda kubhadhara. Technologists vanogadzira zvigadzirwa muvharumu vasina tarisiro pane zvinodiwa pamusika nemikana vangangoburitsa chigadzirwa chisingazovhure kambani sekutarisirwa. Kurudzira mhinduro kubva mukutengesa uye kushambadzira kune timu yekusimudzira uye kuongorora maindasitiri mafambiro ekuenzanisa gwara remugwagwa wechigadzirwa nezvinodiwa zvemberi.
Shongedza vashandi nemidziyo yakakodzera inodiwa kuti vanyatso kutaurirana muzera remagetsi - Kukurukurirana zvinobudirira kunoda zvinopfuura runhare mbozha uye email account. Makambani anofanirwa kuseta marongero uye zviyero zvemisangano yemagetsi, mameseji epamoyo uye mitsara yemusangano. Kushongedza vashandi ne software uye Hardware inodiwa pakutaurirana isina musono inochengeta vashandi vachienderana uye vachigadzira. Iko kushandiswa kweyemagetsi musangano software package (izere neruzivo rwekupinda) inoda kuwanikwa kune vese vanoronga misangano. Mitsara yemusangano uye mapassword avo anofambidzana anofanirwa kuzivikanwa uye iine mitsara yemuno kune nyika dzinowanzo kuverengerwa. Chekupedzisira asi chisiri chidiki pane panofanirwa kuve nedhijitari repamhepo apo vashandi vanogona kuposita kutaurirana kwemukati senge makambani madhairekitori anosanganisira wechitatu bato nzira dzekutaurirana uye nhamba dzenhare. Gadza zviyero uye nongedzo zvemukati nekunze kutaurirana. Inoda kuti mafoni afambiswe uye maemail kuti apindurwe seimwe chikamu chebumbiro.
Kuwedzera aya ekutaurirana akanakisa maitiro kune yako tekinoroji kutanga kunobatsira kuve nechokwadi chekubudirira apo timu yako inokura uye yakatarisana nematambudziko ekufambisa mazano matsva uye zvigadzirwa mumusika.
Nzvimbo huru, Joy! Tinotenda zvikuru nekubatana nesu. Vamwe vatsva venhau vanhu vanokoshesa zvachose simba rehukama neruzhinji asi isu takazviona zvichiitika nevatengi vedu!